သင်အွန်လိုင်းသင့်ရဲ့ GED ရနိုင်? | USAHello | USAHello
သင်အွန်လိုင်းသင့်ရဲ့ GED ရနိုင်?
သင်အွန်လိုင်းသင့်ရဲ့ GED ရနိုင်ဆိုဝဘ်ဆိုဒ်များရှိပါတယ်. ဒါဟာမမှန်ပါဘူး. သင်သည်သင်၏ GED ယူတာဝန်ရှိသူတစ်ဦးကစမ်းသပ်စင်တာကိုသွားရမယ်®, HiSET or TASC စမ်းသပ်. ဘယ် website မဆိုငျသညျကိုပြောပြတယ်ဆိုရင်သူတို့သင်တစ်ဦး GED ပေးနိုင်ပါသည်® ဒီပလိုမာလက်မှတ်, ဒါဟာမမှန်ပါဘူး. သူတို့ကိုပိုက်ဆံသို့မဟုတ်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်များကိုမပေးပါဘူး.
သင်သည်သင်၏ GED မရနိုငျ® အွန်လိုင်း. သင်က GED ယူရှိသည်® တစ်ဦးစမ်းသပ်စင်တာမှာစမ်းသပ်. အဆိုပါ GED® စမ်းသပ်ခြင်းက်ဘ်ဆိုဒ်ကိုသင်ကူညီပေးနိုင်ပါသည် တစ်ဦး GED ရှာတွေ့® စမ်းသပ်မှုစင်တာ သငျသညျအနီး. (သင်ပထမဦးဆုံးအတွက်လက်မှတ်ထိုးရန်လိုအပ်ပါလိမ့်မည်။)
ဆက်ဖတ်ရန် အဆိုပါ GED အကြောင်းကို® စမ်းသပ်. အထက်တန်းကျောင်းဒီပလိုမာအကြောင်းကိုလေ့လာပါ. sign up ကိုမည်သို့ထွက်ရှာမည်.
တောင်မှ y ကိုသော်လည်းou သင့်ရဲ့ GED မရနိုငျ® အွန်လိုင်း, နှင့်ou အဆိုပါများအတွက်အွန်လိုင်းလေ့လာလို့ရပါတယ် GED® ကျွန်တော်တို့ရဲ့နှင့်အတူစမ်းသပ် အခမဲ့ GED® ပြင်ဆင်မှုအတန်းအစား. ဒါဟာသင်စမ်းသပ်မှုယူဖို့အဆင်သင့်ရကူညီပေးရန်နှင့်သင့်ဒီပလိုမာရရှိမည်.
အဆိုပါGED®စမ်းသပ်သင့်ရဲ့အသိပညာတစ်ခုစမ်းသပ်ဖြစ်ပါသည်. နာမတော်ကိုအမှီ ပြု. GED®အထွေထွေပညာရေးဒီပလိုမာများအတွက်တို. အဆိုပါGED®စမ်းသပ်ဖြတ်သန်းသင် USA တွင်အထက်တန်းကျောင်းကနေဘွဲ့ရသူတစ်ဦးကဲ့သို့တူညီသောအသိပညာနှင့်ကျွမ်းကျင်မှုရှိသည်ပြသ.
သင်တစ်ဦးအထက်တန်းကျောင်းဒီပလိုမာရှိပါက, သင်သို့မဟုတ်မပြုစေခြင်းငှါတစ်GED®အထောက်အထားများလိုအပ်နိုင်ပါသည်. သင်သည်အခြားတိုင်းပြည်ကနေကောလိပ်ဒီဂရီရှိပါက, အဆိုပါသင်တန်းများနှင့်ဒီဂရီအချို့ကိုလွှဲပြောင်းစေခြင်းငှါ,. သငျသညျကောလိပ်ကိုသွားဒါမှမဟုတ်အလုပ်တစ်ခုရဖို့ရန်သင့်အားကျောင်းမှပြီးဆုံးအထောက်အထားလိုအပ်နိုင်ပါသည်. သင့်ရဲ့GED®ဒီပလိုမာဝင်ငွေသင်ကူညီစေခြင်းငှါ,.